Ukutyhila izibalo kubudlelwane bobuhlanga - Ekujoliswe Kukodating
Ukutyhila izibalo kubudlelwane bobuhlanga
Ukuba ucinga ngokuthandana kwabantu bezinye iintlanga, unokuba nomdla malunga neenkcukacha-manani kubudlelwane bezinye iintlanga. Ngelixa izinga lokuthandana kwabantu abatshatileyo kunye nomtshato sele likhulile kumashumi eminyaka adlulileyo, bangaphi abatshatayo? Kulawo atshatayo, ngawaphi amaqela ezizwe ekunokwenzeka ukuba abe kunye? Ukongeza, ngaba kukho umahluko phakathi kwamadoda nabafazi, nkqu nohlanga olunye? Makhe sijonge kumanani ukuze sifumanise.
Imbali yobuDlelwane bobuhlanga
Kunzima ukuyikholelwa le nto namhlanje, kodwa kutsha nje ngo-1967, yayikho imithetho yelizwe eyayingavumi ukutshata nabantu bezinye iintlanga. Le mithetho ayikhange ibhukuqwe de kwagqitywa ityala leNkundla ePhakamileyo, uLoving vs Virginia ngo-1967. Kwimeko enjalo, iNkundla ePhakamileyo yafumanisa ukuba kwakungekho semthethweni kwilizwe laseVirginia ukuba liwuyeke umtshato wabantu bezinye iintlanga.
Esi sigqibo sajongwa ngokungathandwa ngabanye. Uvoto olwenziwe kwiminyaka emibini kwasekuqaleni, ngo-1965 yiNkampani yakwaGallup yaveza ukuba ama-72 eepesenti abamhlophe eMzantsi bafuna ukuvalwa umtshato wohlanga olunye. Abamhlophe emantla babengamashumi amane anesibini ekhulwini.
Ukusukela ngoko, inani lemitshato likhule ngokubonakalayo. Ngo-1970 kwakukho imitshato engama-65,000 kuphela ebandakanya abantu base-Afrika baseMelika nabamhlophe. Ngo-2005, elo nani lakhula laya kuma-422,000. Kuzo zonke izibini ezitshatileyo, babemele iipesenti ezimbini zemitshato ngo-1970 ngophando lweYunivesithi yaseStanford. Ngo-2005, elo nani laya kufikelela kwipesenti ezisixhenxe kwimitshato ezizigidi ezingama-59 eUnited States.
Nangona ingasekho imithetho evala ubudlelwane, ukuthandana kwabantu bezinye iintlanga kuhlala kungumbandela ophikisayo kwabanye abantu.
Iinkcukacha-manani eziNxulumene nobuDlelwane beNtlanga
Endaweni yokujonga idatha ekrwada enokucinga ukuba ayibalulekanga kubomi bakho, kunomdla ngakumbi ukujonga ukuba mangaphi amadoda nabafazi bohlanga ngalunye abanemitshato yobuhlanga. Gcina ukhumbula ukuba ukusukela ukuba le datha imele imitshato, inani labantu abathandanayo abathandanayo okanye abantu abatshatileyo bahlala ngaphezulu.
Ubudlelwane base-Afrika-baseMelika nabamhlophe
Xa abantu base-Afrika baseMelika kunye nabamhlophe betshata, kukho amaxesha angama-2.65 amathuba okuba ngumyeni wase-Afrika-waseMelika kunye nomfazi omhlophe. Ngapha koko, iipesenti ezingama-73 zayo yonke imitshato yase-Afrika-yaseMelika kunye neyabaMhlophe inolu seto.
Ubudlelwane baseAsia noMhlophe
Xa abantu baseAsia nabaMhlophe batshata, imeko iphantse yatshintshwa. Kule mitshato, amaxesha angama-3.08 kunokwenzeka ukuba umyeni abe Mhlophe kwaye umfazi abe ngu-Asiya.
Ubudlelwane base-Afrika-baseMelika nabaseAsia
Le mitshato isenqabile. Xa ezi zibini zitshata, amaxesha angama-6.15 amathuba okuba umyeni abe ngu-Afrika-waseMelika kunye nomfazi waseAsia.
Xa amadoda nabasetyhini baseSpain bethatha isigqibo sokutshata umntu wohlanga olwahlukileyo, umahluko phakathi kwamadoda nabasetyhini uphantse ulingane. Iipesenti ezilishumi elinesibhozo zabafazi baseSpain abatshatileyo kwindoda engeyiyo eyaseSpain. Kwiphepha le-flip, iipesenti ezili-15 zamadoda aseSpain anomfazi ongeyena umSpanish.
Kwimitshato ebandakanya i-Hispanics kunye ne-Whites, amaxesha angama-1.17 amathuba okuba umfazi abe li-Hispanic kwaye umyeni umhlophe kunenye indlela ejikeleze.
Oko kutyhilwa ngala manani
Ngelixa uninzi lwazo zonke iintlanga zisatshata omnye umntu wohlanga olunye, ngamanye amaxesha unokuziva ngathi amalungu ohlanga lwakho akhethwe lolunye uhlanga. Oku ngamanye amaxesha kunokubangela ingxaki ukuba ufuna kuphela ukuthandana okanye ukutshata umntu wohlanga lwakho.
Umzekelo, abafazi base-Afrika nabamaMerika kufuneka bakhuphisane nabasetyhini abaMhlophe kumadoda ase-Afrika-aseMelika, njengoko la manani angasentla etyhila.
Ukuthengisa izinto zokudlala lonke ixesha
Amadoda aseAsia eneneni abi kakhulu ngokweenkcukacha-manani kunabafazi base-Afrika nabamaMerika. Kubafazi abali-1 000 abatshatileyo baseAsia, kuphela ngamadoda angama-860 aseAsia atshatileyo. Xa kuthelekiswa, kubo bonke abafazi abali-1 000 abatshatileyo base-Afrika nabamaMerika, bekukho abantu abayi-1,059 abatshatileyo abangama-Afrika nabamaMerika.
Olu datha lubonisa ukuba amadoda aseAsia akhetha ukutshata abafazi baseAsia, kodwa kuba abafazi baseAsia kunokwenzeka ukuba batshate indoda yolunye uhlanga, ishiya abafazi baseAsia abangaphantsi ukuba bakhethe.
Ufanele Wenze Ntoni?
Nokuba zithini na iinkcukacha-manani kubudlelwane bezinye iintlanga, ukuthatha isigqibo sokuthandana okanye ukutshata nomntu wolunye uhlanga sisigqibo sakho. Kusenokwenzeka ukuba ujongane nemiceli mngeni ngakumbi kwaye nokuhlolisiswa lusapho ukuba utshata umntu wolunye uhlanga. Kodwa ukubuya, unethuba lokonwabela iyantlukwano engayi kukwazi izibini ezizezinye.
Xa ufuna uthando, jonga ngaphaya kobuhlanga, kwaye loo nto, ngaphaya kwenkangeleko, inqanaba lentlalontle kunye nobakaki wezoqoqosho ngokunjalo. Ngokwenza njalo, uyawandisa amathuba akho okufumana ulwalamano olwanelisayo noluthandekayo.
Imoto Isiqinisekiso I-Trailer And Rv Camping Estate And Financial Planning Umbala Wenwle Umxholo Iigadi
ukucoca njani izikhonkwane zejeli
yimalini indawo yokungcwaba
irhafu kumama oswelekileyo
ngubani umhlaza ohambelana kakhulu
ukucoca njani iindonga ngeviniga